Dagaal ka socda Waqooyiga Itoobiya oo degaano kale ku fiday | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dagaal ka socda Waqooyiga Itoobiya oo degaano kale ku fiday
Dagaal ka socda Waqooyiga Itoobiya oo degaano kale ku fiday
Dagaal culus ayaa lagasoo sheegayaa gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya wararkii ugu dambeyay ee halkaa naga soo gaarayana waxaa ay sheegayaan in dagaalkii ka qarxay gobolka Tigray bishii Nuveember uu ku sii fidayo gobalka Amxaarada.
Ciidamada federaalka iyo sidoo kale ciidamada gobolka Amxaarada ayaa ku lug lahaa la dagaalanka fallaagada Tigreega ee TPLF, sida uu BBC-da u sheegay sarkaal ka soo jeeda deegaanka Amxaarada.
Wararka ku saabsan dagaallada sii xoogaysanaya ayaa imaanaya iyadoo dowladdu ay ku dhawaaqday xabbad-joojin hal dhinac ah bishii hore hase yeeshee aan dhag jalaq loo siinin.Dhammaan dhinacyada ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu sii hurinayo colaadda.
Xiisadda ayaa sii xoogeysatay tan iyo markii xoogaga TPLF ay dib uqabsadeen inta badan deegaanno ka tirsan gobalka Tigray kadib duullaankii ciidanka dowladdu ku qaadeen bishii Juun.
Maamullada dalka ka jira ayaa wada abaabul ay ku doonayaan inay ku biiraan dagaalka, iyadoo isu soo baxyo lagu qabtay dalka oo dhan si dadka loogu dhiirigaliyo inay is qoraan oo ay ka qayb qaataan dagaallka ka dhanka ah TPLF.
Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay (WFP) ayaa ka digaya inuu gabaabsi noqon doono gargaar cunto oo loogu tala galay 400,000 oo qof oo ku nool xaalad macluul ah kuwaas oo ku sugan gobalka Tigray.